Zava-tsy vita iaraha-mahita… | NewsMada
Zava-tsy vita iaraha-mahita…
Fotoam-pifidianana izao, mandeha ho azy amin’izany ny fanamarinan-tena sy ny fandokafan-tena. Te haka ny fo sy ny vaton’ny mpifidy tsinona. Manginy fotsiny ny fampanantenana, ny fanaovana fanamby; eny, na vina sy vinany manaka-danitra aza.
Mahavariana sy mahavalalanina amin’izany rehetra izany ny afitsoky ny fitondrana. Izy aloha no eo ka lazaina, milaza tena rahateo aza: tsy misy mahavita ny vitany, hono, hatramin’izay. Sahy manao fampitahana amin’izany… Inona na aiza izay eo?
Kibo mitsara tena amin’izay hoe fiovana sy fihatsaram-piainana ny isam-batan’olona, ny isan-tokantrano, ny isam-paritra… Tsy mihamahantra tokoa ve, ohatra, ny maro amin’izao? Mila porofo mivaingana izay, fa tsy vitan’ny tarehimarika.
Tsy hita be ihany izay fanafana na fanamaivanana ahay ny fahasahiranam-bahoaka amin’izao: tsy fandriampahalemana, fidangan’ny vidim-piainana, fandrobana tany etsy sy eroa, famelana ny harem-pirenena ho tantely afa-drakotra anjakan’ny vahiny…
Mahatakona afenina sy mahavaha izay tsy fahombiazana sy kitoatoa rehetra izay ve ny hoe zava-bita? Fandio iray siny, tsy mahaleo ny fandoto iray tandroka. Izay raha atao hoe misy sy be ny zava-bita: maso miara-mahita ny rehetra sy ny tsirairay.
Mampitampim-bava ny tsy fanarahan-dalàna, ny tsy fangaraharana, ny kolikoly avo lenta, ny fivarotan-tanindrazana, ny fisian’ny tsimatimanota, ny kiantranoantrano… Zava-doza tsy roa amin-tany izany, mamoahehatra, fanetriben’ny firenena.
Izay no tsy laitra sy tsy azo andeferana, na toy inona ny hoe zava-bita mampievotrevotra. Firy tao-maty izay? Be lavitra ny ratsy vita mitondra fahavoazana ho an’ny firenena sy vahoaka. Tsy fahaizana sy tsy fahombiazana no antony, fa tsy inona.
Izany ve mbola avela hitohy, hitombo, hihanaka? Fotoam-pandinihana izao, fanapahan-kevitra. Manome voninkazo fa tsy voankazo ny fitaka, hoy ny ohabolana afrikanina iray izay. Ho matimatin’izay endri-javatra ivelany manodoka ve?